Saamaynta Dhicitaankii Afgaanistaan ​​ee Safarkii iyo Dalxiiskii Adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » Saamaynta Dhicitaankii Afgaanistaan ​​ee Safarkii iyo Dalxiiskii Adduunka
Wararka Afgaanistaan • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • LGBTQ • Shirarka • News • Dadka • Ogeysiisyada Saxaafadda • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa ka walaacsan xaaladda hadda ka jirta Afghanistan. Madaxweynaha WTN Dr. Peter Tarlow ayaa ah hoggaamiyihii ugu horreeyey ee ururrada socdaalka ee caalamiga ah oo qiimaynaya dhicitaanka Kabul iyo waxa la wareegidda Taliban ee Afgaanistaan ​​ay u samayn doonto dalxiiska adduunka.
Shabakada Dalxiiska Adduunka Madaxweyne Dr. Peter Tarlow waa khabiir caalami ah oo ka shaqeeya warshadaha safarka iyo dalxiiska wuxuuna miisaamayaa in Kabul ay gacanta u gasho Taalibaan taas oo welwel weyn ku ah warshadaha socdaalka iyo dalxiiska iyo xubnaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka ee 128 dal.
Shaki yar baa laga qabi karaa in taariikhyahannadu ka doodi doonaan nacasnimada labada siyaasadood ee Mareykanka iyo Yurub ee ku wajahan Afgaanistaan ​​tobanaan sano ee soo socota. Wadamo badan ayaa isku dayay inay afganbiyaan Afgaanistaan, laga soo bilaabo Shiinaha hore ilaa Ingiriiska, laga bilaabo Ruushka ilaa Mareykanka.
Xaaladaha oo dhan, Afgaanistaan ​​waxay ku noolayd sumcaddeedii ahayd “xabaalaha boqortooyooyinka”. Xilligii dayrta ee Kabul ayaa ah kii ugu dambeeyay oo kaliya ee reer Galbeedka ku fashilmay iyo marka laga eego dhinaca juqraafi-siyaasadeed, saamaynta guuldarradan ayaa la dareemi doonaa sannado ama tobanaan sano oo soo socda.
Waa inaysan qofna la yaabin saamaynta dhacdooyinka intii lagu jiray maalmihii la soo dhaafay, laga bilaabo Ogosto 14 waxay sidoo kale saamayn ku yeelan kartaa adduunka dalxiiska siyaabo aan weli la fahmin ama la dhex gelin saraakiisha warshadaha dalxiiska.
The madaxweynihii hore ee Afghanistan took intii uu awooday intuusan dalkiisa ka soo cararin, iyo saacado ka hor intii aysan Taliban awoodin inay joojiyaan. Isaga iyo qoyskiisuba hadda waxay ku sugan yihiin Abu -Dhabi waxaana lagu soo dhoweeyey Imaaraadka Carabta, oo ah goob safar iyo dalxiis u ah arrimo bani'aadamnimo awgeed. Tani hadda waxay gebi ahaanba burburinaysaa qaab dhismeedka amniga ee dunnida galbeed ka dhistay Afgaanistaan.
In kasta oo ay jirto xaqiiqda ah inay jiraan wax badan oo aan u baahan doonno inaan ka baranno khaladaadkii ugu dambeeyay ee Afgaanistaan, waxaa muhiim ah in khubarada siyaasadda, saraakiisha siyaasadda dadweynaha, iyo saynisyahannada dalxiisku ay horumariyaan fahamka sida ummad yar oo “faqiir ah” u ciyaartay, iyo laga yaabee in mustaqbalka uu sii wado inuu ciyaaro, doorkaas oo kale masraxa adduunka iyo waliba dalxiiska adduunka.
Si aan u fahanno macnaha darajada Kabul, waxaan u baahanahay inaan dalka ka eegno juqraafi ahaan iyo taariikheed ahaanba.
Wakiilada guryaha waxay inta badan daliishadaan diidmada ah inay jiraan saddex eray oo kaliya oo go'aaminaya qiimaha qayb ka mid ah hantida. Erayadani waa “goob, goob, iyo goob” Si kale haddii loo dhigo adduunka meesha hanti ma guurto ah waa wax walba.
Si aad u badan ayaan u dhihi karnaa isla wax ku saabsan quruumaha.
In badan oo ka mid ah aayaha ummad waxaa lagu go’aamiyaa halka ay dunida kaga taal. Tusaale ahaan, ummadaha Mareykanka, gaar ahaan Mareykanka, waxay heleen faa’iido aad u weyn oo ah inay badda kala soocaan Yurub.
Maqnaanshaha Mareykanka ee xuduudaha cadaawadda leh waxay la macno tahay in Mareykanka uu helay raaxada waxa aan ugu yeeri karno "go'doon aad u wanaagsan".
Xuduudaheeda dabiiciga ah, oo ka duwan dalal badan oo reer Yurub ah oo ku nool xuduudo badan oo aad ugu dhow, uma adeegin kaliya inay ka ilaaliyaan qaar badan oo ka mid ah ummadaha Mareykanka weerarada militariga laakiin ilaa bilowga Covid sidoo kale cudurada caafimaadka.
In kasta oo dabayaaqadii qarnigii labaatanaad iyo qarnigii labaatanaad ay arkeen hoos u dhac ku yimid faa'iidadan juqraafi ahaan dalxiiska ballaaran iyo maamulka hadda jira ee Maraykanka oo aan lahayn rabitaan ah inay ilaaliyaan xuduudda koonfureed ee Maraykanka, haddana mabda'a ayaa run ah. Kanada waxay ka faa'iideysatay inay xuduud nabdoon oo dheer la yeelato Mareykanka taas oo u oggolaatay Kanada inay ku bixiso kheyraadka ugu yar difaaca militariga.
Afgaanistaan ​​waa xaalad gebi ahaanba ka duwan. Umaddan aan lahayn baddu waxay ku jirtaa wadnaha waxa taariikhyahanadu ugu yeeraan '' '' waddooyinka xariirta ''.
Illaa xad kuwanu waa dhulalkii ku yiil badhtamaha dunida, waana dhulalkaas in badan oo ka mid ah taariikhda dhaqaalaha adduunka. Afgaanistaan ​​kaliya kuma fadhido badhtamaha waddooyinka xariirta ah, laakiin ummaddu sidoo kale aad bay hodan ugu tahay kheyraadka macdanta.
Sida laga soo xigtay Peter Frankopan isaga oo soo xiganaya sahanka Geological -ka Mareykanka ayaa sheegaya in Afghanistan ay hodan ku tahay cooper, birta, meerkuriga, iyo potash.
Ummaddu waxay kaloo leedahay kaydyo waaweyn oo ku yaal waxa loo yaqaan "dhul -dhif ah".
Kuwani "dhulka" waxaa ka mid ah lithium, beryllium, niobium, iyo naxaas. Markii dhicitaankii Kabul macdantaan dhifka ah iyo walxaha qiimaha leh hadda waxay ku jiraan gacmaha Taliban waxayna macdantaani awood u leedahay inay Daalibaan ka dhigto mid aad u hodan ah.
Ma ahan inaan la yaabno haddii Taalibaan aysan u adeegsan dabeyshaan dhaqaale si ay u sii waddo ujeeddadooda la sheegay ee ah inay abuuraan California Califate.
Dad yar oo reer galbeed ah iyo xitaa saraakiisha dalxiiska oo aad u yar ayaa fahamsan qiimaha dhulalkan iyo macdantaas dhif iyo xaqiiqda ah in Shiinuhu sidoo kale haysto tiro aad u badan oo ah walxahan. Waxaan u isticmaalnaa walxahan wax kasta laga bilaabo soosaarka kombiyuutarka ilaa budada talcum.
Xakamaynta macdanta dhifka ah ee lagama maarmaanka ah iyo dhulka dhifka ah waxay ka dhigan tahay in isbahaysiga Taalibaan iyo Shiinuhu uu caqabad cusub ku noqdo waddamada reer galbeedka iyo in la kordhiyo warshadaha dalxiiska.
Dayrtii Kabul waxay kaloo leedahay qiimayaal siyaasadeed.
Anurag yadav wuxuu leeyahay,
Ogosto 20, 2021 markay tahay 14:47
Waxaa maqaalkan ku jira faallo siyaasadeed oo aan xog badan lahayn marka loo eego wax kasta oo cinwaanku ballanqaaday.
Paul Rogers wuxuu leeyahay,
Ogosto 19, 2021 markay tahay 14:13
Qayb fikrad kicisa & si fiican loo sheegay, Peter. Markii uu Ra'iisul Wasaaruhu la baxayo dhammaan lacagtaas kaashka ah, dhinacna waxaan ku raacsanahay inay tahay wax laga xumaado laakiin dhinaca kale laga yaabee inuu ka fiican yahay (qof walbana waa ogyahay inuu haysto & inuu la xisaabtami doono) intii Taalibaan lahayd, hubaal?
Ashraf El Gedawy wuxuu leeyahay,
Ogosto 19, 2021 markay tahay 07:55
Dhammaan salaamaha khabiirka dalxiiska ee miyir -qabka ah ee culus maqaalkan gorfaynta ee cajiibka ah si uu saamayn ugu yeesho dhicitaanka Afgaanistaan ​​ee gacanta Taalibaan, kaas oo kor u qaada hal -ku -dhegga Islaamka ee dhaqdhaqaaqa dalxiiska iyo socdaalka caalamiga ah.
Deepesh Gupta wuxuu leeyahay,
Ogosto 19, 2021 markay tahay 00:18
Hagaag, haddii aadan gurigaaga u hanan karin si hagaagsan oo aad kharribantahay markaa Ilaah sidoo kale kuma caawin doono… ..
Ujeeddo, ciidan iyo hoggaan toona ma jirin. Waa inaad la dagaallanto dagaalkaaga halkii aad eedayn lahayd kuwa kale. Intee in le'eg ayaad oggolaan kartaa in waddan kasta oo shisheeye ahi joogo waddankaaga.